Liverpool Oo Soo Bandhigtay Waqtiga Uu Virgil Van Dijk Dib Ugu Soo Laabanayo Garoomada
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Liverpool oo soo bandhigtay waqtiga uu Virgil van Dijk dib ugu soo...
Daafaca Liverpool Virgil van Dijk ayaa laga yaabaa inuu ku soo laabto garoomada kooxda heysata Premier League bishii Abriil.
Ciyaaryahankii hore ee Southampton ayaa ku maqnaa dhaawac kulamadiisa ugu danbeeyay.
Van Dijk ayaa sii waday in uu taageerayaashiisa la socodsiiyo muuqaalo ka soo kabashadiisa qolka jimicsiga laakiin shaki ayaa wali ku jira ka qayb qaadashadiisa ka hor dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Si kastaba ha ahaatee, Daily Star ayaa sheeganeysa in daafaca dhexe horumarka degdega ah ee soo kabsashadiisa ay la micno tahay inuu kaliya seddex bilood u jiro inuu ku soo laabto garoonka.
Dhinaca kale, warbixintu waxay intaas ku dartay inay jirto walaac badan oo laga qabo Joe Gomez , kaasoo aan aad u badnayn inuu mar kale ciyaaro xilli ciyaareedkan oo laga yaabo inuusan diyaar u ahayn Koobka Qaramada Yurub.
Iyadoo Joel Matip iyo Fabinho ay sidoo kale dhaawacyo soo gaareen, Liverpool ayaa rajeyneysa inay keensato daafac dhexe oo cusub ka hor inta aan la gaarin maalinta Isniinta, iyadoo Shkodran Mustafi , Romain Saiss iyo Issa Diop dhamaantood la sheegay inay yihiin saxiixyo macquul ah.
Previous articleDhacdooyinka laga diiwaangaliyay kulankii Chelsea ay ka badisay Burnley
Next articleLiverpool oo sameesay Saxiixeeda ugu Horeeyay ee bisha January
Wararka Ciyaaraha Maanta2528
Suuqa kala iibsiga1029